फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद आइतबारदेखि आउंदै, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद आइतबारदेखि आउंदै, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - चैत १८ गतेदेखि फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५०% हकप्रद सेयर बिक्रि खुल्ला हुने भएको छ । बैंकले २२ लाख ८१ हजार ३ सय १३ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यो हकप्रदमा चैत २३ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ ।
हकप्रद शेयर खरीदका लागि विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका साथै फष्र्ट माइक्रोफाइनान्सका सम्पूर्ण शाखा कार्यालय र आस्वा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको चुक्तापुजी ४५ करोड ६२ लाख ६३ हजार रहेको छ भने हकप्रद पश्चात चुक्तापूँजी ६८ करोड ४३ लाख ९४ हजार ३ सय पुग्नेछ ।